admin – Page3– mero sathi tv
खुसिको खबर ! गायिका जलजल परियारको मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको छ,आफ्नो मृगौला दिएर छोरीलाई अर्को जन्म दिने उनकी महान आमालाई सलाम
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:०१ April 5, 2018
LeaveaComment on खुसिको खबर ! गायिका जलजल परियारको मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको छ,आफ्नो मृगौला दिएर छोरीलाई अर्को जन्म दिने उनकी महान आमालाई सलाम
गायिका जलजला परियारको सफलता पुर्वक मृगौला प्रत्यारोपण भएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएकी गायिका जलजला परियारको दुवै मृगौला फेल भएको थियो । जलजला परियारको दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा हिजो सोमबार अप्रेसन भएको थियो । जलजला परियारलाई उनका आमा जुनु परियारले मृगौला दिएका हुन् ।नेपाली तारा तरा सिजन ३ का प्रतिस्पर्धी परिवारको […]
नेपाली चेली बृन्दा दाहालले भारतीय रियालिटी टीभी शो ‘डान्स इन्डिया डान्स’ मा मच्चाईन डान्स धमाका (हेर्नुहोस भिडियो)
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:५७ April 5, 2018
LeaveaComment on नेपाली चेली बृन्दा दाहालले भारतीय रियालिटी टीभी शो ‘डान्स इन्डिया डान्स’ मा मच्चाईन डान्स धमाका (हेर्नुहोस भिडियो)
नेपालीहरुको बाहुल्यता र सहभागीता रहँदै आएको चर्चित रियालिटी शो “डान्स इण्डिया डान्स लिटिल मास्टर्स” को चौथौँ सिजनमा दुई नेपाली बालबालिकाहरुले भारतीयसंगै जजहरुको मन पनि जितिरहेका छन् । चितवन नारायणगढकी १० बर्षीय बृन्दा दाहाल र भारत बस्दै आएका अर्का नेपाली रोसन थापाले आफनो प्रतिभा देखाईरहेका छन् । सफलतापुर्वक टप १६ मा पुगेका बृन्दा र रोसनमध्ये हिजो […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:५२ April 5, 2018
LeaveaComment on डाक्टर बन्ने सपना बुनेकी केकी कसरी बनिन् एक्टर ?
सपना आ–आफ्नै हुन्छन् । रहर फरक हुन्छन् । केही गर्ने, केही बन्ने सोच हरेकको हुन्छ । कतिपय सपना हामी आफैँ देख्छौँ । कतिपय समय र परिवेशले देखाउँछ । अथवा, देख्न बाध्य बनाउँछ । मोडल, अभिनेत्री हुँदै निर्मात्रीको भूमिकामा समेत उभिएकी केकी अधिकारीको पनि एउटा सपना थिया, आफैँले देखेको । सानैदेखि पढाइमा अब्बल केकीको डाक्टर बन्ने […]
सलमानको लागि हलिउड फिल्म छोड्दै प्रियंका
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:४८ April 5, 2018
LeaveaComment on सलमानको लागि हलिउड फिल्म छोड्दै प्रियंका
प्रियंका चोपडाले सलमानको लागि हलिवुड फिल्म छोड्ने निर्णय गरेकी छिन् । उनले हलिवुड फिल्म क्वांटीको छोडेर सलमान खानले अभिनय गर्न लागेको फिल्म ‘भारत’ मा खेल्ने निर्णय गरेकी हुन्। ३५ वर्षिया प्रियंका चोपडाले बलिवुडमा राम्रो करियर स्थापित गरेपछि हलिवुडमा पाइला अगाडी बढाएकी थिइन् । हलिवुडमा समेत उनले आफ्नो करियरलाई माथि लैजान सफल भइन्। हलिवुडमै व्यस्त भएकी […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:४१ April 5, 2018
LeaveaComment on दात किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार, एक सातामै छुट्कारा पाउनुहुने छ (भिडियो सहित)
एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु दातको समस्याबाट ग्रसित छन् । हाम्रो मुख भित्र ७ सय देखी ९ सय प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन्छन् । त्यसमध्येको एक हो ‘स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया’ । हामीले खाएका पदार्थहरु जब दात र गीजाको बीचमा, दाँतको चपाउने भागमा वा दाँतहरुबीचको कापमा दन्तलेउको रुपमा अड्केर बस्छ स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरियाले तत्काल एसिड उत्पादन गर्न […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:३८ April 5, 2018
LeaveaComment on सिने बजारमा यो वर्ष चर्चामा रहेका प्रेमसम्बन्ध ?
बुधबार सिनेमा ‘तिमीसँग’को प्रिमियर गरियो । सिनेमा हेरिसकेपछि धेरैले सिनेमा राम्रो बनेको प्रतिकृया दिइरहेका छन् । कार्यक्रममा सिनेमाकी मुख्य अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह आकर्षक लुक्समा प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनको लुक्सले धेरैलाई आकर्षित गर्यो । यसका अलावा कार्यक्रममा उनका प्रेमी भनिएका मयंक खड्काको उपस्थिति पनि थियो । जसले अहिले चर्चा पाइरहेको छ । प्रायः एक […]
एउटा मोबाइलको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्‍यो भने यी पाँच तरिका प्रयोग गर्नुहोस
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:३२ April 5, 2018
LeaveaComment on एउटा मोबाइलको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्‍यो भने यी पाँच तरिका प्रयोग गर्नुहोस
एउटा मोबाइलमा भएको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्ने धेरैलाई परिरहेको हुन्छ । प्रायः नयाँ मोबाइल किन्दा पुरानो मोबाइलको नम्बर सार्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा एक–एक नम्बर गर्दै फेरि टाइप गर्नुपर्ने झन्झट नै धेरैजसोले स्विकारेको पाइन्छ । यो निकै झूर तरिका हो । हजारौं नम्बर यसरी एउटा मोबाइलबाट अर्कोमा सार्न कम्ता मुस्किल पर्दैन । तर, एउटा मोबाइलमा […]
विज्ञानका अनुसार यी महिलाको फिगर हो संसारकै उत्कृष्ट, यस्तो छ लुक
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:२९ April 5, 2018
LeaveaComment on विज्ञानका अनुसार यी महिलाको फिगर हो संसारकै उत्कृष्ट, यस्तो छ लुक
टेक्सास युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार बेलायती मोडल केली ब्रुकको शारीरिक बनावट विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको छ । उनका अुनसार केली न त दुब्ली छिन्, न त मोटी । उनको शरीरको हरेक अंग पूर्ण रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ । कसरी गरियो अनुसन्धान? वैज्ञानिकहरुले यो अनुसन्धान गर्नुभन्दा पहिले एक सर्वेक्षण गरेका थिए । सो सर्वेक्षणमा […]
चीन एलियनसँग सम्पर्क गर्न सक्ने विश्वकै पहिलो देश बन्न सक्ने !
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:२२ April 5, 2018
LeaveaComment on चीन एलियनसँग सम्पर्क गर्न सक्ने विश्वकै पहिलो देश बन्न सक्ने !
अन्तरिक्षमा सुपरपावर (सर्वशक्तिमान) बन्ने कार्यमा अगाडि बढ्दै गरेको छिमेकी देश चीनले हालै एउटा ठुलो दावा गरेको छ । चीनको भनाई अनुसार यदि उनीहरुले भने जस्तै भयो छिट्टै एलियन (अन्तरिक्ष मानव) सँग सम्पर्क गर्न सफल हुने संसारकै सबैभन्दा पहिलो देश हुने दाबी उसले गरको छ । एलियन्ससँग सम्पर्क स्थापित गर्ने काममा निकै नजिक पुगिसकेको चीनले खुलासा […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:१५ April 5, 2018
LeaveaComment on थाहा छ ? यी ५ राशि हुने मानिसहरू सबैभन्दा चलाख र होशियार हुन्छन्
तुला राशि हरेक समस्याको सहजै समाधान निकाल्न तुला राशि भएका मानिसहरू आफ्नो बुद्धिमानीको कारण नै चिनिन्छन् । यो राशि भएका मानिसहरू आफ्नो स्तरमा आइडिया सोच्ने गर्दछन् र यसलाई एक अलग ढंगले प्रदर्शन गर्दछन् । यदि कुनै सोचलाई परिवर्तन गरी केही नयाँ काम गराउने सोच्नुहुन्छ भने यसको लागि तुला राशि भन्दा राम्रो कुनै राशि हुनसक्दैन । […]